XARUNTA FANKA AXIAL | Shiinaha AXIAL FAN Soo -saareyaasha, Alaab -qeybiyeyaasha
ZL taageere axial taxane
ZL taageere axial taxane waa taageere gaar ah nidaamka hawo qaboojinta ay soo saartay shirkadeena. Waxay ku habboon tahay waqtiyada hawo -qaadista oo leh qulqul weyn iyo cadaadis hawo oo hooseeya. Qaabkeeda dheecaanka ah waxaa lagu hagaajiyay tikniyoolajiyadda sare ee CFD, taas oo kaliya ma hagaajinayso cadaadiska wax soo saarka, laakiin sidoo kale waxay yareysaa buuqa waxayna wanaajisaa hufnaanta. Waxay leedahay astaamaha badbaadinta tamarta iyo buuqa hooseeya. Waxay si gaar ah ugu habboon tahay dhammaan noocyada qaboojiyaha, nadiifinta, hawo nadiif ah, HVAC Qaybaha qaboojiyaha ee taageeraya ayaa si weyn loogu adeegsaday hoteellada, hoteellada, dhismayaasha xafiisyada, guryaha, dugsiyada, isbitaallada, warshadaha, miinooyinka, shineemooyinka, qaboojiyaha hawo baabuurka iyo kuwa kale beeraha.
Taageerayaashan taxanaha ah waxay leeyihiin laba qaab oo kala duwan oo matoorada taageera: matoor hal-waji ah iyo mootada saddexda weji leh. Waxa kale oo aad u habayn kartaa matoorada taageeraya gaarka ah ee leh danabyo kala duwan iyo soo noqnoqosho sida waafaqsan baahiyaha isticmaalahaaga. Aad bay ugu habboon tahay dalabka dalal kala duwan, gobollo iyo beero.
LKZ Taxanaha Taageeraha qulqulka Axial
Tilmaanta Tusaha Fanku Qaab-dhismeedka Badeecadda iyo Sharaxaada 1. Taageeraha mootada waxaa kaxeeya mootada saddex-waji ah oo aan isku habboonayn. Darajada dahaarka mootada waa F darajada ilaalintuna waa IP55. 2. Dareeraha waxaa laga sameeyaa xaashiyo bir ah oo duudduuban waxaana loo qaabeeyey si waafaqsan mabda'a aerodynamic. Waxay leedahay astaamaha mugga hawo weyn, cadaadis sare iyo buuq yar. Darajada saxnaanta dheelitirka impeller waa G2.5. 3. Faleemadu waa mid ka mid ah qaybaha muhiimka ah ee taageere. Waxaa lagu baaraa ...